Terms & Zvazviri-25% Match Up To £ 1000 Daily
Kukwidziridzwa Izvi zvichava kushingaira mazuva ose pakati rechi16, 17fung uye rechi18 December 2016 (GMT)
GMT rinoenderana ACST -9.30hrs, -1hr INO, PTZ + 8til.
Kuti ave kukwikwidza pamitambo bhonasi, vatambi vanofanira kuisapo kushoma pakati £ 10.
A bhonasi pamusoro 25% kwako okubhengi rokutanga pazuva kusvika vaifanira pamusoro £ 1,000 zvichawedzerwa kuchikwama chenyu.
Bhonasi Credits vachaitwa kuchikwama chenyu mukati 3 kushanda mazuva kuguma kukwidziridzwa.
Standard wagering zvinodiwa 30x inouya mari kushandisa pamberi bhonasi kana runoenzanirana winnings inogona kutorwa.
Chete wagers akaita pamusoro Real Money mitambo zvichawedzera kurutivi wagering zvinodiwa.
Wagers akaita pamusoro Play For Free mitambo haazorambi kuverenga kurutivi wagering zvinodiwa.
Please kuenda “Nhoroondo yangu nhoroondo” chikamu kuongorora yose pachimirirwa bhonasi tungamidzana yako.
Terms uye Conditions – Chipiri Match –…